Daawo lagula tacaalayo cudurka Covid-19 oo laga helay Mareykanka - Jowhar Somali Leader
Home Somali Daawo lagula tacaalayo cudurka Covid-19 oo laga helay Mareykanka
Daawo lagula tacaalayo cudurka Covid-19 oo laga helay Mareykanka
Waxaa jirto caddeyn iyo faham kooban oo ah in dawada Remdesivir ay dadka ka caawin karto in ay ka caafimaadaan cudurka korona, sida ay saraakiisha Mareykanka sheegayaan.
Remdesivir waxay hoos u dhigeysaa astaamaha lagu garto xanuunkaillaa 11 maalmood halkii 15 ay ahaan lahayd, sida lagu ogaaday tijaabo laga sameeyay daafaha caalamka.
Macluumaadka oo buuxa lama daabicin, balse khubarada waxay sheegeen in “natiijo aad u wanaagsan” ay noqon karto haddii la xaqiijiyo, laakiin ma ahan “xabbadii baabi’in lahayn” xanuunka.
Waa dawo ay u badan tahay in nolol lagu badbaadiyo, lagu yareeyo culeyska saaran isbitaallada iyo in qeybo ka mid ah xannibaadaha la qaado.
Remdesivir waxaa markii hore loo sameeyay in lagu daweeyo cudurka Ebola. Waa dawo ka hortageysa cudurada faafa, waxayna shaqadeedu tahay in fayraska ay la dagaasho ka hor intuusan gaarin unugyada jirkeena.
Tijaabada waxaa sameeyay Machadka Qaran ee Mareykanka ee arrimaha Xasaasiyadda iyo Cudurada (NIAID), waxaana lagu sameeyay 1,063 oo qof. Bukaannada qaar waxaa la siiyay dawada halka kuwa kalena la siiyay dawo kale.
Dr Anthony Fauci oo madax ka NIAID wuxuu yiri: “Macluumaadka waxay muujinayaan in Remdesivir ay yareyneyso saameynta, waa muhiim, waana wax ku ool muhiim ah in ay xilliga looga caafimaadayo cudurka yareyneyso.”
Wuxuu sheegay in natiijada ay cadeyneyso in “dawada ay la dagaallami karto fayraska” Waxayna “albaabada u fureysaa in hadda aan awoodno daweynta” bukaannada.
Saameynta ay dawada ku yeelaneyso heerka geerida weli ma cadda. Xilligii hore, heerka geerida ee dadka la siiyay dawadan waxay ahayd boqolkiiba 8%, halka kuwa la siiyay dawada kale ee placebo waxay heerka dhimashada gaartay boqolkiiba 11.6%.
Sidoo kale weli ma cadda cidda ka faa’idaysa dawadan. Waxaa la ogolaaday in dadka u muuqda in ay ka caafimaadayaan, in taas uun loo dedejiyo miyaa? mise waxay ka hortageysaa in dadka ay u baahdaan in la geliyo qeybta xaaladaha halista ah ee neefsiga? Dawada ma waxay u fiican tahay dhallinyarada mise odeyaasha? Mise dadka xanuunada qaba ama kuwa fiican? Bukaanka ma wuxuu u baahan yahay in dawada la siiyo marka uu fayraska ku cusub yahay jirka?
Kuwan waa su’aalaha muhiimka ah marka la soo bandhigayo xogta oo dhameystiran, maadaama dawada ay laba faa’iido leedahay – in nolol la badbaadiyo iyo in xannibaadaha la qaado.
Prof Mahesh Parmar, agaasimaha Shaybaarka tijaabada ee MRC ee ka tirsan UCL, kaas oo madax ka ah arrimaha tijaabada Yurub wuxuu sheegay: “Ka hor inta aan dawadan laga dhigin mid la heli karo oo diyaar ah, waa in dhowr arrimood la eego: xogta iyo natiijada waa in ay eegaan dadka sharciyeeya, si ay u qiimeeyaan haddii dawada la fasaxayo, sidoo kale waxay u baahan tahay in hay’adaha kale ee caafimaadka iyo dalal kale ay qiimeeyaan.
“Inta ay taasi socoto, waxaan heli doonnaa xog badan iyo tijaabo waqti dheer qaadata, iyo dawooyiinka kale ee aan sameyneyno, iyo in haddii dawada ay ka hortageyso in Covid-19 loo dhinto.”
Haddii dawada ay ka hortagi karto in bukaanka uu u baahdo qalabka neefta siiya, ka dib culeyska cisbitaallada saaran wuu yaraanayaa, wayna yaraaneysaa in loo baahdo in dadka ay kala fogaadaan.
Prof Peter Horby, oo ka tirsan Jaamacadda Oxford, wuxuu maamulayaa tijaabada ugu wayn caalamka ee lagu sameynayo dawada Covid-19. Wuxuu yiri: “Waxaan u baahannahay natiijada oo dhameystiran balse haddii taas la xaqiijiyo waa arrin ad u fiican waana war u wanaagsan dagaalka ka dhanka ah fayraska korona.
“Tallaabooyiinka xiga waa in la raadiyo macluumaad dhameystiran iyo ka shaqeynta sidii dawada remdesivir ay diyaar ugu noqon lahayd suuqyada.”
Xogta Mareykanka ee remdesivir waxay soo banbaxday xilli tijaabo la mid ah taa ay ka socoto Shiinaha, sida lagu qoray wargeyska Lancet ee dawooyiinka ka hadla. Wuxuu joornaalka sheegay in aysan guuleysan tijaabadaas Shiinaha.
Si kastaba, tijaabadaas waxay ahayd mid aan dhameystirnayn sababtoo ah guushii laga gaaray xayiraaddii Wuhan ayaa sababtay in dhaqaatiirta aysan helin bukaan lagu tijaabiyo.
“Macluumaadkan waa kuwa wanaagsan, iyadoo taa la eegayana, weli ma jirto dawo la cadeeyay in ay u fiican tahay Covid-19. Waxaa suuragal ah in la dedejiyo meelmarinta remdesivir oo lagu daweeyo Covid,” ayuu yiri Prof Babak Javid, oo ka tirsan Qeybta Caabuqyada ee Isbitaalka Jaamacadda Cambridge.
“Si kastaba, waxaa sidoo kale la arkay in remdesivir aysan ahayn dawadii ugu dambeysay ee fayraska: faa’iidada guud ee ah in lagu badbaadayo dawadan waxay tahay 30% boqolkiiba”.
Dawooyiinka kale ee lagu tijaabinayo Covid-19 waxaa ka mid ah midda malariya, tan HIV oo weerar celis ku qaadi karta fayraska, iyo sidoo kale waxyaabo xoojinaya unugyada Difaaca jirka.
Waxaa loo maleynayaa in dawooyiinka anti-virals ay yihiin kuwa wanaagsan marxaladaha koobaad ee fayraska iyo dawooyiinka Difaaca jirka oo la qaato marka xanuunka uu sii yaraanayo.
Dagaal dhex maray Ciidamo kala taabacsan Mas’uuliyiin ka tirsan Gobolka Banaadir
C/rashiid Xidig “Madaxweyne Farmaajo waxaa ugu baaqayaa inuu si degdeg dalka uga saaro Amb. Madiera”
Maamulka degmada Qansaxdheere oo ka hadlay Diyaarad gargaar siday oo la rasaaseeyay